Apple nitory an'i Qualcomm $ 1.000 miliara | Vaovao IPhone
Tsy mitsahatra ny tontolon'ny fitoriana ao amin'ny orinasa Cupertino. Raha matotra ianao, io dia asa azo antoka toy ny hoe mpiasam-panjakana, tsy hitsahatra tsy hanana zavatra hatao ianao. Amin'ity indray mitoraka ity Apple dia tafiditra amin'ny raharaha manjavozavo manohitra an'i Qualcomm, mpanamboatra microprocessors mahomby indrindra ho an'ny fitaovana finday, malaza amin'ny faritry Android. Toa izany resaka izany dia noho Qualcomm dia mety ho nanangona mpanjakavavy tamin'ny Apple izay tsy tokony nananany. Ny zon'antoka amin'ny indostria dia loharanom-bola tena lehibe, ary io vola notenenin'i Apple avy amin'ny Qualcomm io dia toa tsy tavela any aoriana.
Toy izao no CNBC:
Apple dia nanenjika an'i Qualcomm mitentina 1.000 miliara dolara, milaza fa nanangona mpanjakavavy tsy an'ny zareo i Qualcomm. Apple dia niampanga an'i Qualcomm tamin'ny fampiasana fepetra isan-karazany amin'ny fifaninanana tsy ara-drariny, ao anatin'izany ny fiampangana ny zon'olombelona izay tsy azy ireo.
Manokatra ny fandrarana ny adihevitra lava ao amin'ny Fitsarana izany, indrindra raha raisintsika an-tsaina izany iPhones sy iPads dia nampiasa chips telecom nataon'i Qualcomm mandra-pahatongan'ny iPhone 7, izay ny ampahany amin'ny famokarana nozaraina tamin'i Intel, ny ho avy tokana mpamatsy chips telecommunications ho an'ny orinasa Cupertino.
Izany dia manampy tranga maromaro miandry izay apetrak'i Apple ao anaty fantsona, toy ny fitoriana an'i Samsung amin'ny fanaovana plagiarisme sy ny olan'ny bateria amin'ny iPhone 6 izay tadiavin'izy ireo hamaha haingana amin'ny programa fanoloana. Amin'izay mba, Hampahafantarinay anao mandritra ny volana maro ny fivoaran'ny fangatahana ity eo anelanelan'ny Qualcomm sy Apple. Indray mandeha indray, ny patanty dia olana mazava ho an'ireo izay te hanararaotra azy ireo nefa tsy manaraka ny fomba ara-dalàna mifanaraka amin'izany,
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple nitory an'i Qualcomm $ 1.000 miliara